Myalwar-Diary: May 2007
ပြုံးတယ်ဆိုတာ မင်္ဂလာတစ်ပါးပါပဲ…တစ်ချို့ကဘာရယ်မှန်းမသိဘူး…မျက်နှာကြီးကို တည်တည်ကြီးထားတတ်တယ်…တစ်ချို့ကကျတော့ မျက်နှာကြီးကို ဆူဆူပုပ်ပုပ် ကြီးထားတတ်တယ်…..ကျွန်မ အရင်ကဆိုရင်မျက်နှာကို ဆူဆူပုပ်ပုပ် ကြီးနဲ့ပဲ နေတတ်တယ်။... အဲဒီတော့ တစ်ချို့က ကျွန်မကို မာန ကြီးတယ်လို့ထင်ကြတယ်… ကျွန်မဆိုရင် မခေါ်ရဲ မပြောရဲ သလိုလို ဆက်ဆံကြတယ်…. ပြီးတော့ကျွန်မတို့ဟာ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်ဆက်ဆံနေကြတဲ့ သူတွေဖြစ်လို့ လူမှုဆက်ဆံရေး ကိစ္စဟာလည်း ကျွန်မတို့အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါလာပြန်ရော…. မျက်နှာ ဆူဆူပုပ်ပုပ်ကြီးထားတဲ့သူနဲ့ မျက်နှာလေးပြုံးချိုနေတဲ့သူ နှစ်ယောက် ယှဉ်တွဲပြီးလာကြပြီ ဆိုပါစို့…ကျွန်မတို့ ဘယ်လိုလူမျိုးကို အရေးပေးဆက်ဆံမည်နည်း..???? ကျွန်မကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်လိုက်မိသည်…ကျွန်မဆိုရင်လည်း မျက်နှာလေးပြုံးချိုနေသူကိုပဲ ဦးစားပေးဆက်ဆံ လိုက်မည်…မျက်နှာကြီးဆူပုပ်နေသူ ဆိုရင်ဘယ်သူကမှ အရေးတယူလုပ်ပြီး မဆက်ဆံချင်ကြဘူးလေ…တစ်ချို့ကကြတော့ ရှေ့မှာ ကြောက်သလိုလိုနဲ့လေ… နောက်ကွယ်ကြတော့ " သူလုပ်စာပဲ စားနေသလိုလို " အတင်းကမျိုးစုံ ပြောချင်ကြသေးသည်.. လူ့သဘာဝကိုး……ခုဆို သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်တောင်မှ ရှိသေးသည်… " အမြဲတမ်းပြုံးနေလိုက်ပါ… ရိုးရိုးလေးမင်းမျက်နှာ ကမ္ဘာကျော်တွေတောင် မမှီနိုင်ဘူးကွာ" တဲ့လေ.. "မာသာထရီဇာ " ပြောခဲ့ ဘူးတာလေးလည်းရှိတယ် ရှင့် ၊ " ပြုံးပါ၊ သင့်ဇနီးကို ပြုံးပါ၊ သင့်ခင်ပွန်းကို ပြုံးပါ၊ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ပြုံးပါ၊ သင် မည်သူမည်ဝါ ဆိုသည်မှာ အရေးမကြီးပါ၊ တစ်ဦး ကို တစ်ဦး ပြုံးပြခြင်းဖြင့် ကြီးမားသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာတို့ ရှင်သန်နိုးကြား လာပါလိမ့်မည်" လူတိုင်းက လိုလားနေကြတဲ့ အပြုံးမျက်နှာလေးကို ကျွန်မတို့ အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီး နေကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်………………..
Posted by myalwaryone at 6:14 PM2comments:
ကျွန်မဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်လေး… "လောကတွင် အကောင်းဆုံးသောအရာ"
ကျွန်မတို့ မန္တလေးမြို့မှာ လည်းမီးအင်မတန်ပျက်တယ်.. ဒီနေ့ဟာ မီးလာရက်ဖြစ်လို့ အိပ်ရာဝင်စာအုပ်ဖတ်မယ်လို့ ကျွန်မစဉ်းစားထားမိတယ်… တစ်နေကုန်စာသင်ရ အတန်းချိန်တွေနဲ့ မနားရတဲ့ ကျွန်မအဖို့ အိပ်ရာပေါ်တက်ပြီး ခေါင်းအုံးပေါ်ခေါင်းလေးချလိုက် တာနဲ့ ဘာစာအုပ်မှ ဖတ်ချိန်မရလိုက်ပဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်…. ကျွန်မ (၁၀) တန်းတုန်းက ဆရာမ ကကျွန်မတို့ကို အမြဲဆူတယ်…ကျောင်းသားကျောင်းသူ ဘ၀မှာတော့ စာသင်ရတာကို ခက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ကြီးလုပ်တယ်လို့တွေးနေမိတယ်…တစ်နေကုန် စာသင်ရတာမို့လည်း ညဘက်စာကျက်ချိန်ကျလည်း အင်မတန်ပျင်းတယ်…ညဘက်စာကျက်ချိန်တွေဆို စာမကျက်နိုင်ပဲ ခဏခဏ အိပ်ငိုက်မိတယ်…အဲဒီတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆရာမ ကျွန်မခုထိ လေးစားရတဲ့ ဆရာမက လူဆိုတာတစ်နေ့သေရမှာပဲတဲ့လေ…. .အချိန်အကြာကြီး အိပ်ရမှာတဲ့လေ…ခုလူတွေအိပ်နေတယ်ဆိုတာကလည်း တစ်ကယ်မသေခင် အစမ်းလေ့ကျင့်နေတာတဲ့… အဲဒီအတွက် ကျွန်မတို့ရဲ့တန်ဖိုး ရှိတဲ့အချိန်တွေကို အိပ်ခြင်းနဲ့ မကုန်ဆုံးစေနဲ့တဲ့ လေ…ခုလည်းကျွန်မရဲ့ အချိန်လေးတွေကို အိပ်ခြင်းနဲ့ မကုန်းဆုံးစေချင်ဘူး.. အဲဒီအတွက် ကျွန်မ ဒီညတော့ စာအုပ်များများ ဖတ်မယ် စဉ်းစားထားတယ်….ကျွန်မဖတ်မယ်လို့ ရွေးထားတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရဲ့ "လောကတွင် အကောင်းဆုံးသောအရာ" တဲ့လေ…လောကမှာ အကောင်းဆုံးသောအရာတွေ အများကြီးရှိသတဲ့လေ….ဒါပေမယ့် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးသော အရာတွေထဲမှာ သီလစင်ကြယ်ခြင်းဟာလည်း အကောင်းဆုံးသော အရာတစ်ခုပါပဲတဲ့….ကိုယ်ကျင့်သီလ ကောင်းခြင်းရဲ့ အကျိူးတရားတွေကတော့ အများကြီးရနိုင်တယ်တဲ့ ရှင့်…. လူချစ်လူခင်များမယ်တဲ့ …လူတွေကသာမကပဲ နတ်တွေကပါ ချစ်မြတ်နိုးကြမယ်တဲ့…. ဒါ့အပြင် သက်ရှိသတ္တ၀ါ အားလုံးရဲ့ ချစ်ခင်ခြင်းကို ခံရမယ်တဲ့လေ….ဒီလို အကျိူးတွေကို သီလ လုံခြုံတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မှ ရနိုင်တယ်တဲ့…. ဒါဆို ကျွန်မတို့လူသားတွေ သီလဆိုတဲ့ အကျင့်သီလကို လုံခြုံအောင်ထားသင့်ပြီပေါ့နော်….ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းခြင်းဟာ ပီယဆေးတစ်မျိုးပါပဲတဲ့… လူတွေက မိမိတို့ကိုယ်ကို မွှေးပျံ့အောင် အမွှေးနံ့သာတွေ မျိုးစုံသုံးနေကြတယ်……ကျွန်မတို့ဆီမှာ သီလဆိုတဲ့ အဆောင်လေးသာ ကျွန်မတို့ ဆောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် အားလုံးကချစ်လာပါလိမ့်မယ်…..ကိုယ့်ကို မြင်ရုံနဲ့လည်းချစ်… အသံလေးကြားရုံနဲ့လည်း ချစ်နေကြမှာပါတဲ့…သီလထက်ကောင်းတဲ့ ပီယအဆောင် မရှိနိုင်တော့ပါ ဘူးတဲ့….ဒီအလင်္ကာလေးကိုလည်း ကျွန်မသဘောကြမိတယ်….
ရုပ်ရည်၊ ဥစ္စာ၊ ပညာတန်ဖိုး
Posted by myalwaryone at 1:19 PM2comments:
ကျွန်မကြိုက်တဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပေါ့… ဆရာခင်မောင်သန်း(စိတ်ပညာ) ရေးတာလေ…ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာတော်တော်ကို စုံတယ်…ယဉ်ကျေးစွာ ဘယ်လိုပြောဆိုမလဲ ….ကျိုးကြောင်းဘယ်လိုဆင်ခြင် ကြမလဲ… မိမိအားပြောဆိုသူတွေကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲ….ဘယ်လိုနားထောင်မလဲ… ဘယ်လိုတွေမေးမလဲ…. စကားလမ်းကြောင်းဘယ်လို လွှဲမလဲ….ကိုယ်ရဲ့အမြင်ကို တစ်ဘက်လူသိအောင် ဘယ်လိုပြောမလဲ…မိမိပြောချင်တဲ့ အကြောင်းကို တစ်ဘက်လူကို ဘယ်လို စကားဖြတ်ပြောမလဲ…….မိမိရဲ့သဘောထားကို ဘယ်လိုပြောမလဲ…… အဲဒါလေးတွေပါဝင်တယ်…..လူတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ် လေးပေါ့ ရှင်……ကျွန်မကြိုက်တဲ့ စာသားလေးတွေ ရှိတယ်…… လူတွေကသူများရဲ့ အပြုအမူတွေကိုပဲဝေဖန်နေ ကြတယ်…. ကိုယ်တိုင်ကျ ဘယ်လိုပြုမူဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာကို မေ့လျော့နေကြတယ်… အဲဒါကို ဆရာက သူများတွေကိုဆက်ဆံတဲ့ နေရာမှာ ဘယ်လိုဆက်ဆံသင့်တယ် ဆိုတာကို အရေးပေးပြီးရေးသားထားပါတယ်…..သူပြောထားတဲ့ တစ်ချို့စာသားလေးတွေဆိုရင် ကျွန်မတော်တော်ကို ကြိုက်နှစ်သက်မိတယ်....
ရုပ်အလှကို မျက်စိနဲ့ ခံစားနိုင်သလို.. စိတ်အလှကိုလည်း နားနဲ့ ခံစားနိုင်တယ်တဲ့ လေ…မိမိရဲ့စိတ်အလှကို တိုးစေဖို့ မိမိကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်မှရသတဲ့လေ.. အဲဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ဥာဏ်ကောင်းဖို့မလိုသလို..အသိဥာဏ်ကြွယ်ဝဖို့လည်း မလိုပါဘူးတဲ့လေ….
အငြင်းပွားမှုဆိုတာ အတ္တအချင်းချင်းခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားတာပဲ ဖြစ်တယ်တဲ့လေ...
ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ သူကြည့်တဲ့ ရှုထောင့်က ကြည့်တတ်ချင်းဟာ
ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကိုရဖို့ကလည်း စာသင်တဲ့နေရာမှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိဖို့လိုလာပြန်ရော….ရုပ်လှတာမလှတာနဲ့ မဆိုင်ဘူးနော်….. စ်ိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင် ကျွန်မတို့ဘယ်လိုနေမလဲ…..
1.အမှန်တရားကို သိဖို့က အစဉ်အမြဲ အရေးပါမှုရှိတယ်…သို့ပေမယ့် အငြင်းပွားမှုမှာ အနိုင်ရတာထက် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်တာက ပိုပြီးအရေးပါတယ်… အများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရအောင် သင်ယူရမယ်….
2.စ်ိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ သင့်ရဲ့အလုပ် ၊စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဖြစ်မယ့် သင်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ အများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရအောင် လုပ်ရမယ်..စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောဆိုတတ်အောင် လေ့ကျင့်ရမယ်…
3."ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ" ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ရလာဒ်တွေကို ရနိုင်တယ်…
4.တစ်ယောက်ယောက်က စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းတစ်ခုပြောလာ ရင် ထောက်ခံ ပြီး သူနဲ့ အတူပြောဆိုရမယ်….
ဒီစာသားလေးတွေကတော့ ကျွန်မကြိုက်လို့မှတ်ထားလိုက်မိတဲ့ စာသားလေးတွေပေါ့…..
Posted by myalwaryone at 10:57 AM2comments:
ပေးဆပ်နေမယ် သက်ဆုံးထိ ။
Posted by myalwaryone at 2:15 PM No comments:
ကျွန်မနေ့တိုင်းသူများတွေရဲ့ Tag လုပ်တာကို ကြည့်ပြီးရီလိုက်ရတာ.. ကိုယ်အလှည့်လည်း ဘယ်တော့ များရောက်လာမလဲလို့ပေါ့…. ဟော…ခု ညီမလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းမှု ကြောင့်ခုတော့ ကျွန်မအလှည့် ကိုရောက်လာပါပြီရှင်…
အစကတော့ မဖြေတော့ဘူးလုပ်နေတာပဲ….နောက်တော့ သူပြောတဲ့ ဆုတောင်းလေးတွေကို ရချင်လို့လေ…Internet Star ဖြစ်ချင်တယ်… ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးနော်….လူတွေရဲ့ Internet ပေါ်မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေမယ့် Star မျိုးပဲ ဖြစ်ချင်တယ်။ Essential လေးပေါ့နော်(Browser) လေးပေါ့ရှင်.... အိုအေစစ်လေးပေါ့နော်.. ပြီးတော့သူက ပြောထားသေးတယ်… ချစ်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်ပါစေတဲ့ လေ….အဲဒီဆုတောင်းလေးလည်း ပြည့်ချင်မိတာ အမှန်ပါပဲ…ကိုယ့်ကိုလူချစ်လူခင် များတယ်ဆိုတာက ကောင်းတာပေါ့နော်…. အဲဒါကြောင့် ရေးမိတာပေါ့…ပြီးတော့သူက ပြောထားသေးတယ် ရှင့်…. မရေးဘူးဆိုရင် သူက ကုလားကြီးနဲ့ တွေ့ပါစေတဲ့…ကုလားနဲ့ တော့ ဘယ်ဖူးစာဆုံချင်မလဲနော်…..ဟုတ်ဘူးလား….????
1. လောဘအလွန်ကြီးတယ်….စင်္ကာပူလို နိုင်ငံမျိုးကို ရမည်ဆိုရင်တောင် ... U.S လိုနိုင်ငံမျိုးကို ရလျှင်ပိုကောင်းမည်ဟု အမြဲတွေးနေမိတဲ့သူ… ...ငယ်ငယ်ကဆို သူများကို မုန့်တစ်ခုပေးလျှင် ကိုယ့်ကို နှစ်ခုပေးမှ ကျေနပ်သည့်သူ….အဲ့ဒါကြောင့် မေမေနှင့် တကျက်တကျက်ပေါ့…. (ဟီး..ဟီး… တို့  ၂ ခု လိုချင်တာ ချစ်သူကိုတော့ ဟုတ်ဘူးနော်…. ချစ်သူကတော့ တို့ကတစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်ပဲ….)
2. ကော်ဖီဆိုလျှင် ခါးခါးလေးမှ ကြိုက်သည်…(ချစ်ကောင်း သီချင်းဟုတ်ဘူးနော်..)ကော်ဖီသောက်လို့ ရောဂါရမည် ဆိုလျှင် ထိပ်ဆုံးက ခံရမည့်သူ…. မနက်အိပ်ရာနိုးလို့ ကော်ဖီမသောက်ရလျှင် တနေကုန် ဘာအလုပ်မှ မလုပ်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်……အစွဲတစ်ခုပေါ့နော်…
3. အငန်ကို အလွန်ကြိုက်တယ်။….အိမ်မှာ စားစရာမုန့်မရှိလျှင် ငန်ပြာရည် ဖျော်ကို ဇွန်းနှင့်ခတ်သောက်ဖူးသည်……အငန်တွေစားလို့ တို့မျက်နှာမှာဆို လမျက်နှာ ပြင်လိုဖြစ်နေပေါ့…..
4. ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူဆို ကိုယ့်ကိုအရမ်းချစ်မှ ကြိုက်တယ်… အတ္တ အလွန်ကြီးတယ်……သူ့မှာရှိတဲ့ ချစ်ဆိုတဲ့ အရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခဲတံနဲ့ ချစ်တာက အစ အားလုံး ကိုယ်ပဲ ဖြစ်ချင်တယ်….
5. ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆို အမြဲ ချွဲတတ်တယ်…..သူတို့ကို ကပ်ပြီးဆိုးတတ်တယ်…. ဂျီကျတတ်တယ်….ကိုယ်မချစ်တဲ့ သူဆိုရင်တော့ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ဆက်ဆံတတ်တယ်….
6. ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် လေးဝတ်ရတာကို သဘောကျတယ်….ဘယ်သူတွေဘယ်လို ကဲကဲ တို့ကတော့ ရိုးရိုးလေးနေမြဲပဲ...
7. သနပ်ခါးလိမ်းရမှ နေတတ်တယ်….သနပ်ခါးဆိုလည်း ရိုးရိုးမဟုတ် ပါးကွက်ကြားလေး အမြဲလိမ်းတတ်တယ်….ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျ တော့ လည်းအမြဲစိတ်ညစ်ရတယ်….ပွဲတစ်ခုခု သွားစရာရှိ လို့တိုမျက်နှာမှာ သနပ်ခါးတွေနဲ့ မို့သူငယ်ချင်းတွေက အမြဲပြောတယ်…..တောသူနဲ့ တူလို့တဲ့လေ….
8. သူများကို ဆရာလုပ်ရတာ အရမ်းဝါသနာပါတယ်….ငယ်ငယ်ကတော့ ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်မိတာပေါ့နော်….ခုတော့လည်းသူများတွေကို စာသင်ရတဲ့ အလုပ်ဆရာ အလုပ်ကိုလုပ်ဖြစ်နေတယ်….
ကျွန်မအရမ်းစိတ်ကောက်တတ်တယ်ရှင့်….ကျွန်မက တနင်္ဂနွေ မှာ မွေးလို့လားတော့မသိဘူး တစ်ချို့ကပြောကြတယ်လေ…Sunday မှာမွေးတဲ့သူက ဆံပင်ကောက်ချင်ကောက်..ဆံပင်မကောက်ရင်စိတ်ကောက်တတ်တယ်တယ်ရှင့်…. တို့ကဆံပင်မကောက်တော့ စိတ်ကတော့အင်မတန်ကို ကောက်တယ်….မကောင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးနော်…..ဒါပေမယ့် လူတိုင်းကိုတော့ မဟုတ်ဘူးနော်…
တို့ချစ်တဲ့သူဆို အရမ်းစိတ်ကောက်တတ်တယ်…..သ၀န်တိုတတ်တယ်... တို့ကလူတိုင်းကိုတော့မချစ်တတ်ဘူး….
Posted by myalwaryone at 5:21 PM5comments:
"လမ်းခွဲတာ ၀မ်းနည်းစရာလား "...........
ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိက ရေးတာလေ။ ကျွန်မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ စာအုပ်လေးပေါ့ ။ ဒီစာအုပ်လေးကို မဖတ်ခင်က ဘာကိုဆိုလိုမှန်း ရည်ရွယ်မှန်း မသိခဲ့ဘူး၊ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့မှ ကျွန်မစိတ်မှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နားလည်လာရတယ်။ ကျွန်မကြိုက်တဲ့ စသားလေးတွေရှိတယ်၊
" တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန် တစ်နေရာရာမှာ
ကံက ဆုံတွေ့ ခိုင်းတော့လည်း
ဆုံတွေ့ ခိုက်မှာ ပုံမမေ့လိုက်ပါနဲ့ လား…… တဲ့လေ။
အရမ်းသဘောကြမိတယ်။ လူတွေအားလုံးဟာ ခွဲခွာခြင်းမျိုးစုံနဲ့ လမ်းခွဲကြရတာချည်းပါပဲ။ ရှင်ကွဲခွဲရတဲ့ လမ်းခွဲခြင်းနှင့် သေခွဲခွဲရတဲ့လမ်းခွဲခြင်း ဒါပဲခြားနားတယ်။ ဘယ်လိုပဲ လမ်းခွဲလမ်းခွဲ မေတ္တာရှေ့ထားပြီး လမ်းခွဲကြမယ်ဆိုရင် အဲဒီလမ်းခွဲခြင်းဟာ ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့ လမ်းခွဲခြင်းမျိုး ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲနော်… မေတ္တာမဲ့ ပြီးလမ်းခွဲမယ်ဆိုရင်…..
" မေတ္တာ တိမ်းပါးလို့
စိမ်းကားစွာ လမ်းခွဲခဲ့ ကြပြီဆိုမှဖြင့်
Posted by myalwaryone at 11:56 AM No comments:
ဒီနေ့ဟာ ကဆုန်လပြည့်နေ့ပေါ့။ ကျွန်မတို့ ရုံးတွေပိတ်တယ်လေ။ ကျွန်မတို့ အလုပ်က စာသင်ရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အရမ်းပင်ပန်းတယ်။ ရုံးတွေကလဲ အရမ်းပိတ်ခဲတယ်။ သင်တန်းတွေဖြစ်လို့ တော်တော်နဲ့ မပိတ်ဘူး။ ကျွန်မတို့ ရုံးက၀န်ထမ်းတွေက ရုံးပိတ်ရက်လေးမှာ အပျော်ခရီး ထွက်ဖို့ စီစဉ်ကျတယ်။ ကျွန်မ လိုက်သွားရမလား၊ မလိုက်သွား ရဘူးလားဝေခွဲမရဖြစ်နေတယ် ။ ကျွန်မရဲ့ အားလပ်တဲ့ အချိန်လေးတွေကိုလည်း အကျိုးမရှိ ကုန်ဆုံးမှာ အရမ်းစိုးရိမ်မိတယ်။ မနက်မိုးလင်းမှ မိုးချုပ် အလုပ်မှာပဲ တစ်နေကုန် နေဖြစ်တဲ့ သူဆိုတော့ လည်းအားလပ်တဲ့ အချိန်လေးမှာ မိဘရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ နေချင်မိတယ်။အဲဒါနဲ့ ကျွန်မလိုက်မသွားဖြစ်ဘူး။ ကျွန်မရဲ့ အားလပ်တဲ့ အချိန်လေးတွေကို အကျိုးရှိအောင် ဘယ်လိုအသုံးချရပါ့။ "စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေတဲ့ လေ" ကျွန်မ စာဖတ်ဝါသနာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရုံးမှာဆိုလည်း ကျွန်မစာသင်ချိန်အားတယ်ဆိုရင် စာဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ဟာ ကဆုန်လပြည့်နေ့ပေါ့။ ကဆုန်လပြည့်နေ့မှာ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်လို့ ဗုဒ¨ နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ဖတ်မယ်စဉ်းစားထားမိတယ်။ စာအုပ်တွေထဲ မှစာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်မယ်ဆိုပြီး ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ သာသနာ့တန်ဆောင်ဆရာတော်ကြီး များ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒ စာအုပ်လေးဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုပဲ ကျွန်မရွေးပြီးဖတ်လိုက်မိတယ်။ ဆရာတော်ကြီးများရဲ့ ဆုံးမသြ၀ါဒ တွေကိုဖတ်ပြီး ကျွန်မမှာ အသိတွေပိုပြီးရှိလာသလို ခံစားရတယ်။ အဲဒီ ဆုံးမသြ၀ါဒတွေထဲမှ ကျွန်မကြိုက်တဲ့ စာသားလေးတွေကို ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ အလွတ်ရအောင် ထပ်ခါထပ်ခါဆိုနေမိတယ်။ ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလ ရဲ့ဆုံးမသြ၀ါဒ ကိုလည်းကျွန်မသဘောကျ နှစ်သက်မိတယ်။ " ဖျင်း ဖျင်းမှန်းသိ လူတော်ဖြစ်နိုင်၏ ။ ဖျင်းပါလျက်ပင် တော်တယ်ထင် ဖျင်းမြဲဖျင်းမည်ပင် " ဟုတ်တယ်နော်.. တစ်ချို့တွေက ကိုယ်ကိုကိုယ် အရမ်းတော်တယ် တတ်တယ်ဆိုပြီး ထင်နေကြတယ် ။ ကျွန်မကြားဖူးတဲ့ စကားပုံလေးလိုပေါ့။ " မပြည့်တဲ့ အိုးဘောင်ဘင်ခတ် သတဲ့လေ" ၊ ပြည့်တဲ့အိုးတွေ ကတော့ဘယ်လောက်ပဲလှုပ်လှုပ် ဘောင်ဘင် မခတ်တော့ဘူး။ ဒီလိုပဲပေါ့ လောကကြီးမှာ ကိုယ်ရဲ့အသိအတတ်တွေပေါ်မှာ မာနတွေအပြည်ထားတဲ့ လူတွေရှိပါလားလို့ ကျွန်မစဉ်ခြင်မိတယ်။ အဲဒါတွေကို ခုံမင်နေတော့ရော ကျွန်တို့သေသွားခဲ့ရင် အဲဒါတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့နောက်မှာ လိုက်ပြီး ပါလာမှာမို့လို့လား။ ကျွန်မ ရဲ့ အတွေးတွေက အရမ်းကိုခရီးဆန့်ခဲရပြီ။ …..
Posted by myalwaryone at 11:52 AM 1 comment:
ကျွန်မဖတ်မိတဲ့ စာအုပ်လေး… "လောကတွင် အကောင်းဆုံးသော...